Mpanamboatra masinina plastika - mpamatsy kitapo plastika mpamokatra masinina
Manam-pahaizana amin'ny sifotra
Masinina fonosana Flexo
Masinina lamination tsy misy solvent
Gluing sy milina iraisana
Masinina mamolavola tsindrona
Masinina mitsoka horonantsary
PE&PP tsindrona tsindrona & milina bobongolo
Masinina mitsoka tavoahangy PET
Masinina fanariana horonantsary
Masinina fanaovana plastika
Masinina fanaovana kitapo tsy tenona
Milina fametahana lakaoly vita amin'ny tànana PET / PVC
LQ-GSJP-300A Masinina fanaraha-maso sy famerenam-bolo
LQ-WMHZ-500II Milina fametahana tanan-tanana
LQA-080T80 PET tavoahangy Baler mitsangana
LQA-070T80 PET tavoahangy Baler mitsangana
B-1300 Masinina mamaky haingam-pandeha
ZHMG-601950 (HL) Fanontana pirinty Rotogravure mandeha ho azy ...
mpanamboatra kitapo upg-900
Milina fanamboarana harona plastika dia famolavolana manokana ho an'ny fanaovana hosoka sy famehezana, faribolana 1 pcs goavambe jambo ary manapaka horonana kely 2 amin'ny famokarana haingam-pandeha. Solosaina mahaleo tena 2 mifehy ny famolavolana ary entin'ny motera servo 5.5KW. Ny mpanamboatra kitapo dia mety ihany koa amin'ny famokarana kitapo T-shirt plastika azo ampiasaina.
Sasao aloha, avy eo manosotra sy manisy tombo-kase, manisy tombo-kase ary manapaka hafanana, manindrona farany. Ny milina fanaovana plastika dia afaka manamboatra tsipika roa sy tsipika efatra amin'ity mpanamboatra kitapo T-shirt gusset ilany ity. Ny milina fanaovana kitapo plastika dia afaka mihazakazaka maherin'ny 200 pcs isa-minitra. Milina fanaovana kitapo plastika dia mety amin'ny fepetra takian'ny tsena indrindra.
30% apetrak'i T / T rehefa manamafy ny filaminana, fandanjana 70% amin'ny T / T alohan'ny fandefasana. Na L / C tsy azo ivalozana eo imasony
Fametrahana sy fanofanana
Ny vidiny dia misy ny saram-pametrahana, ny fiofanana ary ny mpandika teny, na izany aza, ny vidiny mora toy ny tapakilan-tseranana iraisam-pirenena miverina eo anelanelan'ny firenenan'i Chine sy ny mpividy, ny fitaterana eo an-toerana, ny fampiantranoana (hotely kintana 3), ary ny vola am-paosy ho an'ny injeniera sy ny mpandika teny. ateraky ny mpividy. Na, ny mpanjifa dia afaka mahita mpandika teny mahay eo an-toerana. Raha mandritra ny Covid19 dia hanao fanohanana an-tserasera na horonan-tsary amin'ny alàlan'ny rindrambaiko whatsapp na wechat.
Warranty: 12 volana aorian'ny datin'ny B / L
Izy io dia fitaovana mety amin'ny indostrian'ny plastika. Mety kokoa sy mora ny manitsy, mamonjy asa sy vidiny hanohanana ny mpanjifantsika manao effierency bebe kokoa.
Reny Roll Width
Ny hatevin'ny sarimihetsika
10-35µm isaky ny sosona
100-230pcs / min X2 Tsipika
Diameter Unwind Film
Dimension an'ny milina
Masinina kitapo plastika kely Lq-300 × 4
Ny milina fanaovana plastika dia natao manokana ho an'ny famokarana kitapo T-shirt haingam-pandeha 4. Raha sakan'ny kitapo mihoatra ny 250mm, ny milina fanaovana kitapo plastika dia afaka mamokatra tsipika roa hahatonga kitapo lehibe.
Ny milina fanaovana kitapo plastika dia manana karazana photocell miloko roa hanarahana ireo kitapo vita pirinty. Andalana efatra na tsipika roa famehezana kitapo sy fanapahana no miasa miaraka. Mampiasà vatan-tavoahangy hydralika 5 taonina roa milina hanotoana kitapo ho endrika T-shirt misy tahony.
Milina fanaovana kitapo plastika dia mety amin'ny famokarana T-shirt plastika kely bags amin'ny famokarana volavola sy fiasa miorim-paka.
orinasa goavambe upgv dia tsara amin'ny famehezana hafanana sy ny famokarana hafanana milina harona plastika.
4 Andalana / 2 Andalana
170mm - tsipika efatra 250 mm
250mm - 520mm ho an'ny tsipika roa
10-55 micron isaky ny sosona
160-220pcs / min * Andalana 4
Masinina kitapo biodegradable Lq-450X2
Ity milina ity dia tsipika famehezana hafanana sy famolahana hafanana, izay mety amin'ny famokarana kitapo sy famokarana kitapo tsy vita pirinty. Ny fitaovan'ny kitapo azon'ny masinina atao dia ny fitaovana HDPE, LDPE ary ny famerenana sary mihetsika miaraka amin'ny filer ary sarimihetsika biodegradable. LQ-450X2 dia noforonina manokana ho an'ny famokarana kitapo T-shirt haingam-pandeha 2. Ny milina dia manana famolavolana solosaina roa tsy miankina ary entin'ny motera servo 4.4 kw indroa. Ny milina dia afaka manisy tombo-kase sy manapaka ny sarimihetsika plastika azo ovaina sy ny sarimihetsika azo zahana.
Ny milina dia mety amin'ny famokarana kitapo T-shirt plastika haingam-pandeha sy fandidiana maharitra mandritra ny 24 ora.
30% apetrak'i T / T rehefa manamafy ny filaminana
Fandanjana 70% amin'ny T / T alohan'ny fandefasana.
Na L / C tsy azo ivalozana eo imasony
100-300pcs / min X 1 tsipika
upg-700 milina fanaovana kitapo namana eco
milina upg-700 dia masinina kitapo perforation famehezana ambany. Ny masinina dia manana singa V-avo telo heny avo telo heny, ary ny sary mihetsika dia mety aforitra indray mandeha na indroa. Ny zavatra tsara indrindra dia ny fanitsiana ny toeran'ny vala telozoro. Famolavolana masinina ho an'ny famehezana sy perforating aloha, avy eo aforeto ary aforeto amin'ny farany. Ny avo roa heny V-folds dia hanao tombo-kase kely kokoa sy ambany.
Ity milina ity dia filma tsy miala voly aloha, avy eo famehezana sy perforating aloha, avy eo V- aforeto ary averina amin'ny farany. Kitapo famehezana etsy ambany amin'ny horonan-taratasy tsy misy dikany. Ny milina dia afaka manamboatra kitapo eco namana matevina kokoa hamaly ny fepetra takian'ny tsena.
Unwinder Film Width
Max. Rewinder kitapo sakan'ny
7-35 micron isaky ny sosona
Masinina fanaovana kitapo biodegradable UPG-300X2
Ity masinina ity dia famehezana hafanana sy perforation ho an'ny famerenana kitapo, izay mety amin'ny fanontana sy fanamboarana kitapo tsy fanontana. Ny fitaovan'ny kitapo dia horonantsary biodegradable, LDPE, HDPE ary fitaovana fanodinana.
UPG-300X2 dia afaka manamboatra kitapo fako amin'ny famokarana mahomby amin'ny alàlan'ny fanovana azy ireo horonan-taratasy plastika. Ny milina dia manome fitaovana roa misy fitaovana fanamafisam-peo cretive voltage izay afaka mamantatra ny toerana mety hanapotehana ilay horonantsary ary hanao ny horonan-taratasy amin'ny isa nalaina.
Ny milina dia mety amin'ny famokarana volavola ho an'ny kitapo kely fako izay kely kokoa noho ny 250mm ny sakany. Ny fomba famoronana kitapo masinina dia ny famelomana horonantsary aloha, avy eo tombokase sy perforate ary averina amin'ny farany.
Sintomy ny horonan-tsary, avy eo asio tombo-kase ary hamboarina, averina amin'ny farany
7-25µm isaky ny sosona
kitapo upg-450X2 amin'ny milina fanaovana horonan-taratasy
upg-450X2 dia natokana ho an'ny kitapo kitapo misy horonam-taratasy na famokarana fototra ao amin'ny PVC. Manampy ny mpamatsy kitapo hanatsara ny fahaiza-manao kitapo sy hampihena ny angovo sy ny fahefanan'olombelona amin'ny fatra betsaka indrindra ny fiasan-tsarimihetsika mandeha ho azy sy ny fiovana fototra. Ny rafitra fanaraha-maso motera servo indroa mahatonga ny famokarana azo antoka kokoa. Io no safidy tsara indrindra amin'ny fanaovana kitapo fanontana tombo-kase farany ambany sy kitapo banga.
Upg dia namolavola ity modely kitapo amin'ny milina fanaovana horonantsary ity dia raisin'ireo mpanjifa amin'ny ankapobeny ary mamokatra ilay kitapo amin'ny kitapo mihodina izay mety amin'ny takian'ny tsena. Ny famokarana kitapo mandeha ho azy tanteraka dia mampitombo ny fahafaha-manao mahomby. Manampy amin'ny fahazoana baiko bebe kokoa amin'ny valiny famehezana sy famerenana amin'ny laoniny, tery sy milamina.
Valim-pifandraisana: hatramin'ny 30faha Oktobra 2021
LQ-XC700 / 800 milina fanaovana kitapo tsy tenona (3 in 1)
Ny maodely 3 amin'ny 1 dia afaka manao kitapo manaraka: Modèle specification unit specification sy fiaviany Mainty ara-teknika Paramete r Type LQ-XC700 / 800 Roller width 1350mm / 1400mm Bag manao speed 20-100pcs / min Bag sakan'ny 200-580mm / 680mm Bag halavany 100-800m Famaritana kitapo 30- 100g Famatsiana herinaratra 220v, 50HZ Herinaratra 17 / 18kw haben'ny ankapobeny LQ-XC700: L9000 * W2300 * H2000mm LQ-XC800: L9000 * W2400 * H2000mm Indrindra ny masinina Manadio singa iray napetraka Mitsivalana traction singa iray napetraka Vert ...
LQ-XB700 / 800 milina fanaovana boaty tsy tenona (5 in 1)
Famaritana singa famaritana modely sy fiaviana Type LQ-XB700 / 800 Roller width 1350mm / 1400mm Bag manao hafainganam-pandeha 20-100 pcs / min Maintérieur Parameter bagtika teknika 200-580mm / 680mm halavan'ny kitapo 100-800m Kit famaritana 30-100gsm Power supply 220v, 50HZ Herinaratra 15 / 18kw ankapobeny habe LQ-XB700: L12500 * W1920 * H2000mm LQ-XB800: L12500 * W2020 * H2000mm Mainly Blanking unit iray napetraka Horizontal traction unit iray napetraka Vertical fold unit iray set Blanking way m ...
LQD-600C Masinina fametahana kitapo mandeha ho azy telo-tonta
Parameter teknika Mode: tombo-kase telo, servos fito, famahanana efatra, servo masinina lehibe, fanapahana indroa mihetsika. Miaraka amin'ny fitaovana ultrasonic. Akora matevina: BOPP, CPP, PET, NYLON, sarimihetsika vita amin'ny plastika laminated, film multiplayer extrusion notsofina, aluminium madio, sarimihetsika vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika, sarimihetsika vita amin'ny plastika vita amin'ny 3.Max. hafainganam-pandehan'ny kitapo: 180 ora / min Hafainganana mahazatra: 120 fotoana / min (tombo-kase telo 100-200mm) 4. Max. hafainganam-pandehan'ny sakafo: ≤35 m / min 5. Haben'ny kitapo: Sakany: 80-580 mm Le ...
LQBQ Series Side Seal Heat manapaka kitapo fanaovana milina
Famaritana ny vokatra Ny kitapo tombo-kase dia tsy mitovy amin'ny kitapo tombo-kase farany ambany sy kitapo misy kintana, sidina lava ny halavany, ary manokatra amin'ny sakany izy. Azo atao tsara àry ny manamboatra kitapo miraikitra, kitapo misy kofehy… Ny milina fanaovana kitapo misy tombo-kase dia afaka manamboatra kitapo fanangonana sakafo toy ny kitapom-bary, ireo indostrialy mampiasa kitapo toy ny kitapom-batsy, kitapo fonosana grament sns ... Ity milina ity dia mampiasa motera servo mba hanomezana sakafo ny sarimihetsika, fehikibo conveyer hitaterana kitapo. EPC, interter, silinder daholo ...
Ny iraka ataon'ny UP Group dia mamatsy vokatra azo itokisana, manatsara ny teknolojia tsy tapaka, mifehy tsara ny kalitao, manome serivisy aorian'ny fivarotana ara-potoana, manavao ary mivoatra tsy tapaka.
RM2401-2406 No.511 Mansion Tianmuxi Road. Shanghai 200070, PR Sina